Muwaadinka Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Dalka Koonfur Afrika. – STAR FM SOMALIA
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa waxaa la sheegay inay toogasho ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Soomaalida Ganacsi ahaan u tegay dalkaas.
Muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Maxamed Cali Kaariye ayaa Kooxaaha Burcada ah waxaa ay ku dileen meel aan ka fogeen Goobtiisa Ganacsi oo ku taalla gobolka Limpopo ee dalka Koonfur Afrika.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in ragga dilka u geystay Muwaadinka Soomaaliyeed ay goobta ka baxsadeen,isla markaana ay iyaga goobta ka qaadeen meydka marxuumka.
Ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur Afrika ayaa tegay halka uu dilka ka dhacay, kuwaas oo sameeyay howlgallo aan wax natiijo ah kasoo bixin oo ay ku baadi goobayeen Kooxda dilka geysatay.
Dalka Koomfur Afrika ayaa waxaa sanad walba lagu dilaa Soomaalida ku Ganacsatada, waxaana todobaadkii hore ay aheyd markii muwaadin Soomaaliyeed lagu dilay Gudaha dalkaas mid kalena lagu dhaawacay.